Gariiga oo sheegay inuusan qaabili doonin tahriibayaal ay ku jiraan Soomaali | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Gariiga oo sheegay inuusan qaabili doonin tahriibayaal ay ku jiraan Soomaali
Gariiga oo sheegay inuusan qaabili doonin tahriibayaal ay ku jiraan Soomaali
Greece (Halqaran.com) – Dowladda Gariiga ayaa sheegtay in aysan qaabili doonin dadka magangalya doonka ah ee uga imaanaya waddamada Syria iyo Soomaaliya, kuwaasi oo kasoo gudbaya dalka Turkiga.
Wasaaradaha arrimaha dibadda iyo soo galootiga ee dalka Gariiga ayaa sheegtay bayaan ay si wadajir ah usoo saareen in qaraarka xukuumadda Athina uu yahay mid saameyn doona dadka magangalya doonka ah ee kasoo jeeda waddamada Afgaanistan, Pakistan, Bangladesh iyo Soomaaliya.
Labadaan Wasaaradood ayaa sheegay in Turkiga uu yahay dal u diyaarsan inuu qaxootiga magangalyo siiyo aysana aqbali doonin dadka xadka uga soo talaabaya ee magangalya doonka ah.
Wasiirka socdaalka Gariiga ayaa sheegay in dalkiisa xilligaan wixii ka dambeeya aysan qaabili doonin ama aqbalayn dalabyada magangalya doonka ah ee waddama muwaadiniintoodu kasoo talaabayaan Turkiga.
Qaraarkaan cusub ayaa ah mid dowladda Gariiga ay ku tilmaamtay mid ay kula dagaalamayso soogalootiga sharci darada ah iyo kuwa dadka tahriibiya.